Xirfadleyda Warbaahinta Bulshadda Xaqiiqda Ma Maamuli Karaan | Martech Zone
Axad, Juun 19, 2015 Jimco, Oktoobar 9, 2015 Douglas Karr
Waxaan dhawaanahan waday tijaabo. Dhowr sano ka hor, waxaan go'aansaday inaan noqdo 100% daahfuran ku saabsan shaqsiyadeyda siyaasadeed, ruuxi, iyo waxyaabaha kale ee aan aaminsanahay boggeyga Facebook. Taasi ma ahayn tijaabadii… taasi waxay ahayd aniga oo keliya aniga. Ujeeddadaydu ma ahayn inaan ka xumaado dadka kale; waxay ahayd si fudud inay ahaato mid hufan. Ka dib oo dhan, taasi waa waxa xirfadlayaasha warbaahinta bulshada ay noo sii sheegaan, sax? Waxay ku celceliyaan in warbaahinta bulshada ay bixiso fursaddan cajiibka ah ee ay ku xirmaan midba midka kale oo ahaadaan daahfuran.
Been bay sheegayaan.
Tijaabadaydu waxay bilaabatay dhawr toddobaad ka hor. Waan joojiyay in aan qoro wixii qoraallo ah oo muran dhaliya oo ku saabsan boggeyga Facebook-ga waxaanan kaliya u xayiray ka hadalka mowduucyadaas markii dadka kale ay ku soo qaadeen bogaggooda. Tani waa sheeko, laakiin tijaabada ayaa igu dhalisay inaan imaado seddex gabagabo:
Waxaan caan ka ahay markaan Aamus oo ra'yigayga iska key ilaali. Taasi waa sax, dadku ma doonayaan inay i ogaadaan ama waxay rabaan inaan noqdo mid hufan, waxay kaliya doonayaan qofka. Tan waxaa ka mid ah asxaabteyda, qoyskeyga, shirkadaha kale, asxaabteyda kale… qof walba. Waxay la falgalayeen qoraalladayda inbadan oo murankoodu yaraa. La yaab ma leh sababta fiidiyowyada bisaduhu u xukumaan internetka.
Inta badan la taliyayaasha warbaahinta bulshada aragti la'aan noloshooda gaarka ah, dhibaatooyinka, waxyaabaha ay rumeysan yihiin, iyo arrimaha muranka dhaliyay ee khadka tooska ah. Ha i rumaysanina? U tag bogga Facebook-gaaga gaarka ah ee baraha bulshada ee aad u jeceshahay wax kasta oo muran ka jiro. Ulama jeedo in lagu boodboodo bandwagons-ka dadweynaha - taas oo ay badanaa sameeyaan - waxaan ula jeedaa inaan mowqif ka qaato xaaladda taagan.
Inta badan la taliyayaasha warbaahinta bulshada quudhso dood qadarin leh. Marka xigta ee xirfadlahaaga warbaahinta bulshada aad ugu jeceshahay ee sameeyay khudbad ama qoray buug ku saabsan daahfurnaanta wuxuu ku boodayaa bandwagon, oo aadan ku raacsaneyn iyaga… ku sheega sidaas boggooda Facebook. Way necebyihiin. Aan ka yarayn 3 jeer ayaa saaxiibkay waxa uu i weydiistay ka deg boggooda fikirkeygana meel kale geeya. Kuwo kale ayaa raacay oo ila saaxiibay markii ay ogaadeen in aan haysto waxyaalo aan rumaysanahay.
Ha igu qaldan, waan qiirooday. Waxaan jeclahay dood weyn mana jiido feedhkayga. Baraha bulshada ayaa u janjeera dhanka hal dhinac halka inta badan aan u janjeero dhanka kale mowduucyo badan oo muran dhaliyay. Anigu dadka kuma raacsani inay diidaan - waxaan si fudud isku dayayaa inaan noqdo qof daacad ah oo hufan waxa aan aaminsanahay. Aniguna waxaan ku dadaalayaa inaan ku ekaado xaqiiqda oo aan shaqsiyan ahayn… inkasta oo aanan dib u celin aflagaadada.
Waxaad badanaa ka maqashaa khadka tooska ah iyo warbaahinta, waxaan ubaahanahay wada hadal daacad ah. Beenta… dadka badankood ma rabaan daacadnimo, waxay kaliya kaa doonayaan inaad ku boodo boodhadooda. Way ku jeclaan doonaan, kula wadaagi doonaan wararkaaga, oo way kaa iibsan doonaan markay ogaadaan inaad ku raacsan tahay iyaga. Runta ku saabsan baraha bulshada waa:
Runta ma xamili kartid.
Xitaa waxaan lahadlay hal mudaaharaad oo muhiim ah oo ii yimid munaasabad qaran, i sii duugista orso, oo ii sheeg inuu jecel yahay mowqifka aan ka qaato mowduucyada qadka internetka… kaliya ma oran karo si cad. Weligiis ma jeclayn lamana wadaagin ra'yi ama maqaal aan ku wadaagay boggeyga Facebook in kasta oo uu aniga i raaco. Ma doonayo inaan ereyo afka geliyo, laakiin taasi asal ahaan waxay ii sheegaysaa in shaqsiyaddiisa internetka ay tahay mid xarago leh, oo si taxaddar leh loo xardhay si loo hubiyo caannimadeeda iyadoo aan qatartiisa la gelinin jeegaggiisa.
Marka anigu isma celin karo laakiin waa yaabay. Maxay kaloo dadkaani internetka ka yiraahdaan oo si fudud loogu farsameeyay inay caan noqdaan, qasabna maahan inay run noqdaan? Markaan u adeegsanno xeeladaha warbaahinta bulshada macaamiisheenna, waxaan inta badan ogaannaa waxaas caanka ah waligeed saameyn kuma lahan sida ay tahay edgy.
Waa tan qaar ka mid ah hufnaanta iyo daacadnimada adiga - inta badan xirfadlayaasha warbaahinta bulshada waa beenaalayaal waana inay qirtaan oo keliya. Waa inay ka tuuraan taladooda BS ee ku saabsan hufnaanta oo ay u sheegaan shirkadaha in, haddii ay doonayaan inay sare u qaadaan gaadhista iyo aqbalaadda, ay tahay inay ka fogaadaan muranka, ku boodaan caannimada caanka ah, farsameeyaan shaqsi xaraash ah… oo ay daawadaan macaashka koraya. Si kale haddii loo dhigo - raac hoggaankooda oo beenta sheeg.
Ka dib oo dhan… yaa daneeya daacadnimada iyo daacadnimada markii ay jirto lacag la sameeyo.
Tags: wada hadal daacad ahdaacadnimoBeenaalayaalbeenwarbaahinta bulshadalataliyayaasha warbaahinta bulshadaxirfadlayaasha warbaahinta bulshadarunta
Jul 19, 2015 markay tahay 1:31 PM
Wixii ay mudan tahay, waxaan ku jeclahay hufnaantaada khadka tooska ah. Waa ku cusbooneysiin waxaanan jecelahay inaan ku fekero inaan si fiican kuu aqaan si aan u fahmo rabitaankaaga dood xushmad leh. Waxaan jeclahay dadka daacada khadka tooska ah iyo ka baxsanba. Waxaan kugu dhiirin lahaa inaad naftaada ahaato.
Jul 19, 2015 markay tahay 1:51 PM
Anigu ma ihi aqoonyahan ku xeel dheer baraha bulshada in kastoo dadka qaarkii ay jecel yihiin inay sanduuqaas igu ridaan. Kaliya waxaan ahay qof xiiseynaya, ma waxaad ii kala soocaysaa qof aan xamili karin runta, oo aan ka helin doodda isla markaana iska ilaalinaysa hufnaanta?
Jul 19, 2015 markay tahay 2:17 PM
Shel, waa wax iska soo horjeedda. Waxaad had iyo jeer ilaalisay xiriir ixtiraam leh khilaafaadka noo dhexeeya! Waa sababta aan aad kuugu xushmeeyo!
Jul 19, 2015 markay tahay 4:31 PM
OK Doug, waxaan dhihi doonaa kuma raacsani adiga, taas oo kuxiran waxa dabeecadda istaaga qofku qaadanayo iyo macnaha guud ee hawlgelinta.
Haddii doodda ama istaagga qofku sameeyo uu ku saabsan yahay ganacsiga, aragtiyada laga qabo suuqgeynta, baraha bulshada, iwm, oo qofna uusan ku raacsaneyn ama uusan si cad u oggolaan marka uu muranka jiro, markaas iyagu sax ma aha.
Haddii dooddu ku saabsan tahay diinta, siyaasadda, qiyamka shaqsiyeed ee aan ku jirin arrimo ganacsi, oo ay iska aamusaan, taasi macnaheedu maahan inay indho sarcaad ku jiraan ama ay ilaalinayaan shakhsi been ah. Waxay dareemi karaan sidaan dareemayo inay jirto waqti iyo goob wada hadalo kaladuwan.
Su’aashaydu waxay tahay, runti ma waxaad ka xanaaqsan tahay arrintan mise waxaad ku rinjiyeynaysaa burush ballaadhan si aad u hesho akhristayaasha inay noqdaan kuwo dhab ah? Waxaan isku dayaa inaan noqdo mid caqli gal ah isla markaana ka fogaada hadalka sarbeebta ah qoraaladayda iyo jawaabahayga, mana helayaan waxqabad badan sida shucuurta ka buuxan, “qoraal kama dhigto sarbeeb”. Wax fiican anigu ma ihi baraha warbaahinta bulshada.
Jul 19, 2015 markay tahay 4:40 PM
Waa hagaag badanaa qaska boostada, gudbiyay ka hor intaanan fursad u helin inaan wax ka beddelo… Sidaan idhi, hubaal maahan baraha warbaahinta bulshada (gaar ahaan markay tahay ogaanshaha sida wax looga beddelo qoraallada aan ka sameeyo taleefankayga…)
Waxaan rajeynayaa in ujeedkeygu uu ahaa mid cad, aflagaadada iyo shucuurtu waxay helayaan jawaabo laakiin had iyo jeer maahan mid ku habboon ama sax ah midkoodna.
Jul 19, 2015 markay tahay 6:47 PM
Ujeeddadaydu way fududahay… in xirfadlayaasha badankood ee talo ka siiya baraha bulshada aysan xitaa raacin taladooda. Daahfurnaan iyo isgaarsiin waxtar ma leh illaa ay daacadnimo iyo si toos ah u socdaan mooyee. IMO, sababaha ugu badan ee aan arrimaha online-ka ugu qabno waa awood la'aanta dadka inay hadlaan maskaxdooda oo yeeshaan wada hadal daacad ah, ama dulqaad la’aanta kuwa ka jira baraha bulshada si loo ixtiraamo kuwa ku kala aragti duwan. Si kastaba ha noqotee, ma caawineyso shirkadaha inay si wax ku ool ah ula xiriiraan macaamiishooda - ama taa beddelkeeda.
Jul 19, 2015 markay tahay 7:59 PM
Qolkaani maxkamaddu ma shaqeynin!
Waxaan leeyahay marka aad dadka qaar damiso, dadka qaar ayaad shidaa. Sheeg waxaad Doug rabto (Waan ogahay inaad sameyn doonto). Xaqiiqdii waxaa jira hadallo munaafiqiin ah oo ka hadlaya xaqiiqda ka dibna muujiya runtooda wax aan ahayn wadada dhexdeeda, marka waan ku faraxsanahay inaad naadisay.
Waxaan u maleynayaa meel kasta oo aad jiifto, haddii aad siyaasadda gasho waxaad ka careysiin doontaa dadka. Fadlan samee. Warbaahinta bulshada ayaa loo maleynayaa inay ka caawineyso dimoqraadiyadda wadahadalka, sax?
Jul 19, 2015 markay tahay 9:15 PM
Waxaan u maleynayaa sidaas, Barry! Laakiin waxaan ogaadey in qaar badani ka fogaadaan la wadaagga waxa ay aaminsan yihiin. Aad ayey u xun tahay, sidaan qabo.
Jul 20, 2015 markay ahayd 6:52 AM
Nasiib darrose, lacagtu waxay umuuqataa daaha daahfurnaanta la'aanta. Si wanaagsan loo qoray, si wanaagsan loo yidhi oo si fiican loo noolaa.
Jul 20, 2015 markay tahay 12:46 PM
Jul 20, 2015 markay ahayd 8:56 AM
Tani waa gabal weyn, Doug. Ku dhahda warbaahinta bulshada Emperor wax dhar ah ma leh waa muujinta dhifka ah ee hufnaanta dhabta ah.
Laakiin waxaan u maleynayaa in keli ahaanta "lataliyayaasha warbaahinta bulshada" ee dhaleeceynta ay aad u yartahay. Cabsida ah in la ahaado baraha bulshada ayaa xaddidaya wadaagida dhamaan laakiin kuwa ugu caasi badan dhexdeena.
Shaki yar ayaa ka jira in baraha bulshada ay kobciso waafaqsanaanta iyo saxnaanta siyaasadeed. Waa uun dabeecadda dhexdhexaadiyaha.
Jul 20, 2015 markay tahay 12:42 PM
Runtii dhibaatadu way balaaran tahay… laakiin waa dadka wacdiya oo mushahar qaata oo aan farta ku fiiqayo.
Jul 20, 2015 markay ahayd 8:57 AM
Sida aan uga hadlay tan waa inaan u ekaado inaan ganacsi ku yeesho LinkedIn iyo shaqsi ahaan Facebook. Twitter wuxuu helayaa iskudhaf fudud labadaba. Natiijo ahaan, waxaan ahay AQOON badan oo xulasho ah oo ku saabsan cidda aan saaxiib la ahay ama aqbalo codsiyada saaxiibtinimo ee ka imanaya Facebook. Waxaan rabaa inay shaqsiyan i yaqaanaan, sidaas darteedna, caadi ahaan layaab malahan fikradayda iyo / ama waxay ogyihiin inaan ka helo dood ama dood xushmad leh.
Qaabkan, waxaan u arkaa inaan la wadaagi karo ra'yigayga isla markaana aan ka wada hadli karo wadahadalka anigoo weli ilaalinaaya cilaaqaadkayga.
Jul 20, 2015 markay tahay 12:47 PM
Marka waa inaad faafreeb ku sameysaa naftaada maxaa yeelay dadka qaar ayaa ku khilaafsan oo xitaa kugu xukumi kara waxa aad aaminsantahay beliefs si kasta oo aad u ixtiraamto. Waan ogahay. 🙂
Jul 20, 2015 markay tahay 4:49 PM
Ma ogi inaan ka fikirayo tan faafreebka oo aad u badan qeybinta. :) '
Jul 20, 2015 markay ahayd 9:59 AM
Runtii kani wuxuu ahaa qoraal fikir kicinaya. Sidee baan diyaar ugu ahay inaan noqdo mid dhab ah markay meheraddu ku lug leedahay? Mawqifkaygu ma xumayn doonaa qof aniga ila ganacsanaya ama ila ganacsan doona? Kuma fiicni waxyaabaha bulshada dhexdeeda ah sidaa darteed waxaan u muuqdaa inaan si joogto ah u dhajin. Hooyaday ayaa ii sheegi jirtay inaan ka fogaado mowduucyada siyaasadeed iyo kuwa diinta. Inta badan, dadku waxay hayaan macluumaad dhab ah, ra'yi iyo xan (FOG). Doodaha umuuqda kuwa kudhagan dhoobada ayaa ah kuwa xanta iyo ra’yigu xukumaan. Waxaan u janjeeraa inaan qariyo shucuurteyda mowduuc ahaan macquul. Dadka badankood waxay sameeyaan isla wax. Kaliya waa markaan hubiyo shucuurteyda (iyo kuwa kaleba sidaas oo kale) mowduuc aan ka fogaado fikrad iyo xanta oo aan yeesho wadahadal wax ku ool ah. Waad ku mahadsan tahay Doug qoraal fikir kicinaya!
Jul 20, 2015 markay tahay 12:48 PM
Mahadsanid! Waana ku raacsanahay… Waxaan jeclaan lahaa uun inaan geesi nahay oo aan ixtiraamno kala duwanaanshaha oo aan joojino ka baxsiga dooda. Waxaad moodaa inay jiraan fikrad ka jirta wadankan inaad aniga ila jirtid ama aad iga soo horjeedid against halkii aad si fudud aniga igaga duwanaan lahayd.
Jul 20, 2015 markay ahayd 10:20 AM
Dhowr fikir hadday tahay.
1. Dadku waa qabyaalad oo waxay jecel yihiin kala dambaynta iyo hufnaanta. Ma jecla kuwa had iyo goor khalkhal galiya amarka oo u janjeera inay ku ceyriyaan cidlada. Tani sidoo kale waa run baraha bulshada. Ma jiraan wax dhexdhexaad ah oo ka takhalusi doona kumanaan sano oo dabeecad xididdo ah dhawr sano gudahood. Dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada waxba kama bedelin sida bini aadamka * runta * ay ula dhaqmaan midba midka kale. Taabadalkeed, waxay heshay dariiq ay aadanuhu ugu qancaan baahidaas qoto dheer ee qabyaaladeed ee khadka tooska ah. Taasi waa sababta ay ugu kacday sidii gantaal. Maaha wax cusub. Waxay awood u siineysaa wax aad iyo aad u duug ah.
2. Waxaan u maleeyay baryahan in, halkii aan ugu yeedhi lahaa 'da'da' dhijitaalka ah ', taariikhyahannada mustaqbalka waxay ku magacaabi doonaan sannadihii 1995 ilaa 2030' Era of Narcissism '. Sidii aan kor uga faallooday, shabakadda iyo baraha bulshada ma aha wadeyaal isbeddel, Waxay yihiin oo keliya warbaahin awood u leh oo ka tarjumeysa waxa shakhsiyaadka iyo qabaa'ilku u maleeyaan iyo dareemaan. Xilligan aan ku jirno da'da dhijitaalka ah, waxaan guud ahaan u isticmaalnay warbaahinta bulshada hab loo wada dhan yahay si loo gaaro maahmaahda '15 daqiiqo ee caannimada' halkii aan si dhab ah u wadi lahayn isbeddel bulsheed oo qoto dheer. Sida raadiyaha iyo telefishinka ka hor, warbaahinta bulshada ayaa si dhaqso leh ugu soo degtay inay noqoto mid dhexdhexaad u ah kuwa hadda caanka ah si ay u xoojiyaan sawirradooda (tusaale, Donald Trump) iyo in qof kasta oo af iyo keyboard leh uu noqdo 'hoggaamiye feker', ama 'isbeddel wakiilka ', ama' hackerka koritaanka '. Waxaan si joogto ah u ciyaareynaa ciyaar soo saarista ereyo cusub si aan u tusno inaan si uun u heysanno fikrado cusub (mar kale cking koritaanka jabsiga), iyo inlagu amaano sida hogaamiyaasha fikirka. Waxaan sidoo kale jabanay ereyo sida, 'hanad', 'fikir hogaamiye', 'guru' iyo kuwa kale. Waxay u muuqataa in qof kasta oo kale oo ku jira LinkedIn uu yahay mid ama in ka badan ee kor ku xusan, in kasta oo sheegashadiisa / sheegashadeeda caannimo ay ahayd in 'dib u habeyn lagu sameeyo' websaydhka ubaxyada ubax ee qoyskiisa oo si tartiib tartiib ah loogu dhaqaajiyo jaranjarada SEO. Is-hoosaysiinta iyo anshaxa ayaa in badan laga fakaraa xilligan, halka magac iyo shakhsiyaddu yihiin lacagta maanta jirta. Waxaan u maleynayaa inay jiri doonto xilli cusub mar uun 'jugtii weyneyd' ay dhammaatay, laakiin illaa iyo xilligaas, guud ahaan waa aniga oo dhan iyo sida aan kuugu adeegsan karo si aan u gaaro himilooyinkeyga.
Jul 20, 2015 markay tahay 12:51 PM
Fikir kicinta. Laakiin sidoo kale waxaan ku dari lahaa inay badanaa yihiin kuwa ka taga maqalka oo loogu yeero 'narcissists' oo horumariya aadanaha. Haddii aad kaliya ka mid tahay xoolaha, waxaa laga yaabaa inaad qayb ka tahay dhibaatada!
Jul 20, 2015 markay ahayd 11:13 AM
Waxay umuuqataa inaad horeyba uheshay Khubarada SM oo kugula doodaya qoraalkan. Noocan oo kale ah miyaanay caddaynaynin ujeeddada?
Jul 20, 2015 markay tahay 12:49 PM
Haa! Haa, way dhacdaa.
Waxaan la socdaa Barry Feldman. "… Markaad dadka qaar iska celiso, dadka qaar ayaad daartaa." Waxaan had iyo jeer ku adkeysanayay in ra'yigeygu yahay mid aniga ii gaar ah oo aan cid kale ku lahayn kanaalkayga bulshada. Waana ku raaxeystaa in laygu yeero dadkeyga aan ila wadaagin aragtideyda. Laakiin sidoo kale waan kugu raacsanahay inay jiraan dad ka baqaya inay dood galaan oo doorbida inay si nabadgelyo ah u ciyaaraan. Xitaa way ila aqbali karaan laakiin kuma dhufan doonaan batoonka "like" iyaga oo ka baqaya in la ogaado. Anigu kama mid ahay. Waxaan jeclahay dadka xanaaqa iyo sumadaha.
Jul 20, 2015 markay tahay 6:32 PM
Waxaan u maleynayaa inay ku kala duwan yihiin in dadka qaarkiis ay codkooda dhiibtaan iyagoo aan xukumin kuwa kale haddii ay diidaan. Waxaan joojiyay inaan raaco qof maalin dhaweyd oo aan runtii ixtiraamayay maxaa yeelay wuxuu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray "nacasyada taas rumeysan…" waxaanan ka mid noqday kuwa "doqomo" ah. Waxaan u maleynayaa in adduunku ilaaway inaan is khilaafin karno iyadoo wali la ixtiraamayo in kuwa kale laga yaabo inay gaareen gunaanad ka duwan isla xaqiiqooyinka.
Jul 20, 2015 markay tahay 7:12 PM
Qodobka noocaas ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan soo ceshano qaddarin xushmad leh oo dalkan ka jirta.
John J. Gidaar
Jul 29, 2015 markay tahay 1:37 PM
Hal shay oo aan inbadan la halgamayo ayaa ah daabacaadaha iyo siyaasiyiinta oo lacag lagu siiyo si ay mawqif uqaataan, maadaama aad tahay qof ganacsade ah waxaad khatar galinaysaa rajada iyo macaamiisha Dabcan weligey kuma aanan wacdin hufnaanta sidaas darteed waxaan u maleynayaa inaan ku jiro the
Jul 30, 2015 markay tahay 2:25 PM
Si run. Waan hubaa in qoraalkaygu lumiyay macaamiil iyo rajooyin. Si kastaba ha noqotee, waxaan doorbidayaa inaan la shaqeeyo dadyowga ixtiraama in aan yeelan karo aragti ka duwan tan aan ahayn. Waa xulasho adag, hubaal.